Tana Quba Qabduu? 002 - NuuralHudaa
Gosa biqiltootaa dachii tanarra jiru keessaa hedduun isaa eessatti akka argamu beeytuu? hedduun keenya biqiltoonni lafarratti qofa waan biqilan seena. inumaa irra hedduun biqiltootaa bishaan keessatti biqilu. Gosa biqiltoota dachii tanarratti uumame keessaa, dhibbentaa 85 kan tahu bishaan keessaa fi cinaa bishaaniitti biqila. Mukkeenii fi biqiltootnni nuti naannoo keenyatti arginu kunniin walumaa galatti dhibbeentaa 15 qofa ta’an jechuudha.
Ilmi namaa jiraachuudhaaf oksijinitti haajama. Oksijinii kana ammoo biqiltoota irraa arganna. Biqiltoonni kaarboon daayoksaayidii hawaa kana keessaa fudhatuudhaan, Oksijiinii nuuf baasu. Nutis oksijiinii kanaan oollee bulla, Bosonni jiidhaan Amaazon oksijiinii dachii tanarra jiru keessaa walakkaa kan ta’u isatu oomisha. Kan hafe naannoowwan biraa irraa oomishama jechuudha. kun hundi Rahmata Rabbii guddaati.
Akka qorattoonni himanitti, bosona duraan dachii tanarra ture keessaa, wanti dhibbeentaa 80 ta’u barbadaawee jira. Sababni kanaa ammoo lakkoofsi ilma namaa dabaluu isaati. Namni lafa mana irratti ijaaratuu fi, lafa qotatee irraa oomishatu barbaacha bosona mancaasa. haala kanaan ilmi namaa lafa waggoota kumaan dura bosonaan uwwifamee ture mancaasuudhaan magaalotaa fi gandoota garagaraatiin bakka buusaa jira.
Lammiin Faransaay tokko bineensota garaan lafarra looyan 400…
Hoolaan Gurra Keessaa Afaan Qabu Turkiyaa Keessatti Argame.